musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Empire State Building Yese Yakashongedzwa Kunze KwemaHoridhe
Holiday cheer iri kutekeshera paEmpire State Building (ESB) sezvo chiratidzo chenyika chiri kuvheneka vatengesi vepanzvimbo vanobuda, kushongedzwa kwepamusoro-soro, uye zvirongwa zvemitambo yemimhanzi kusvika kupera kwegore.
Kubva nhasi, mahwindo echivako cheFifth Avenue Lobby akashongedzwa nezviitiko zvezororo izvo zvinoratidzira goridhe, kupenya, uye zvihwitsi kukudza nguva inoshamisa kwazvo yegore. Iwo mahwindo anoshamisa anorumbidzwa neakamisikidzwa, zviedza zvezororo zveArt Deco, maruva, uye muti weKisimusi wakareba. Vashanyi vanopfuura nepaFifth Avenue Lobby kubva Muvhuro kusvika Chishanu vanozokwaziswawo nenziyo dzezororo dzinoitwa nenyanzvi dzepiyano kubva na8 am kusvika 7pm.
"Mufaro wemwaka wezororo unogona kunzwiwa mumativi ese ezvatakafunga zvekare Observatory Zvakaitika, kubva pakushongedza kunoshamisa kusvika kune vatengesi vedu vefevha," akadaro Jean-Yves Ghazi, purezidhendi weEmpire State Building Observatory. "Tinofara kugamuchira vashanyi kuchiitiko chechokwadi, chemashiripiti panguva yakanakisa yegore."
Kupera kwevhiki kwega kwega kusvika kupera kwaMbudzi, Empire State Building ichatengesa mabira akasarudzika - kusanganisira ayo "View From the Top" Hazy IPA inotengeswa chete pa86th Floor Observatory - yakabatana neCraft+Carry neFive Boroughs Brewing Co. Zvino se yaZvita 2, DŌ, Cookie Dough Confections, NYC-based edible cookies nekambani yemakuki, ichatora 86th Floor semutengesi anobuda muna Zvita. DŌ ichapa zvitanhatu zvezororo uye NYC-themed zvibatiso kubva kune yakakosha 90th Anniversary ngoro kwemavhiki matatu ekutanga muna Zvita.
Menorah hofori inokwazisa vaenzi pavanopinda muEmpire State Building Observatory Experience, uye mukana wemufananidzo wezororo kukona yeKuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwe86th Floor Observatory inobvumirawo vaenzi kutora mifananidzo yavo yegore repazororo neinoyevedza, yechokwadi yeNYC kumashure. Zvishongedzo zvicharamba zvichiratidzwa muimba yekutandarira uye panguva yese yeObservatory Experience kusvika Ndira 6.
The Empire State Building Observatory Experience yakawana $165 miriyoni, pamusoro-kusvika-pasi reimagination, iyo yakapedzwa muna Zvita 2019. Kugadziridza kunosanganisira mukova wakazvitsaurira wevaenzi, inonyudza museum ine madhijitari uye tactile kuratidzwa, uye iyo yakanyatsofungidzirwazve 102nd Floor Observatory. Vaenzi vanobatsirwa kubva muindasitiri inotungamira mukati memamiriro ekunze kunaka kwemamiriro ekunze (IEQ) - senge MERV 13 mafirita uye inoshanda bi-polarization - yekuvimba nevaenzi. Iyo 86th Floor Observatory yakagadziriswa neachangobva kuiswa, tembiricha akabatidzwa mwenje wekupisa kuti uchengete vashanyi vachidziya ivo vachinakidzwa neinopenya yechando vista kubva pamoyo weNew York City.
Chivako chine mukurumbira pasi rose marambi eshongwe achapenya mukati menguva yezororo nemwenje wakasarudzika weKutenda, Chanukah, Kisimusi, uye Evha Idzva Idzva.